अमेरिकी सॉसमा स्क्विड - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
अमेरिकी साल्सामा स्क्विडहरू
माछा48 मिनेट4 व्यक्ति
एक बिहान काममा जानु भन्दा पहिले, म मेरो ड्रयरहरू मार्फत गएँ कोजेरो। राम्रो मौसम चाँडै आउँदैछ र मेरो श्रीमान्ले मलाई कुनै कारणले "हप्काउनुहुन्छ" फ्रिजरमा प्वाल नभएकोमा (र मसँग दुई छ) खाजा पछि सप्ताहन्तको लागि अनौंठो आइसक्रीम पाउन सक्षम हुन।
त्यसोभए म देख्न को लागी मँ रात को खाना को लागी के पाउन सक्छु र यस प्रकार, ती को लागी केहि ठाउँ छोड्न सक्छु प्रिय आइसक्रीम। एक दराज को तल मा मैले स्क्विड को एक झोला भेट्टाएँ र यसलाई defrosting छोडें। दिन भर म केहि को बारे मा सोच्दै थिए नुस्खा कि म सम्झना को ट्रंक को लागी थियो यी स्क्विड को लागी जब सम्म मैले यो पाइन।
सॉसमा यी स्क्विडको साथ तयार छन् ब्रान्डी र मसँग केही क्रिस्टमेसेसको बोतल थियो, त्यसैले म यसको लागि गएँ। तिनीहरू तयार गर्न धेरै सजिलो छ, एक घण्टाको तीन चौथाईमा हामीसँग पहिले नै खानेको लागि केही स्वादिष्ट स्क्वीड तयार छ। तिनीहरू सेतो चामलको साथ गार्निशको रूपमा वा मसँग जस्तो समृद्ध सलादको साथ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
1 अमेरिकी साल्सामा स्क्विडहरू
तपाईं फ्रिज स्क्विडको साथ यो नुस्खा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
750० g स्क्विड
२०० कुचल प्राकृतिक टमाटर
१/२ फिश स्टक क्यूब
प्याज क्वार्टर मा, खुली लसुन लौंग र गिलास मा तेल राख्नुहोस्। हामी टुक्रा पार्यौं Seconds सेकेन्ड, गति 7.
हामी स्प्याटुला र कार्यक्रमको साथ भित्ताहरूको भग्नावशेषहरू कम गर्छौं १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
टमाटर, चिनीको चुटकी र नुन थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
स्क्विड, मरिच र शेयर घन जोड्नुहोस्। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
त्यसो भए हामीले ब्रान्डी र प्रोग्राम थप्छौं १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
समाप्त भएपछि, हामी सेतो चामलको साथ गार्निशको रूपमा सेवा गर्छौं।
थप जानकारी - यस गर्मी को लागी9शानदार आइस क्रीमहरु / Thermomix® संग बनेको स्क्विड संग9व्यञ्जनहरु
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, माछा, साल्सास
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » माछा » अमेरिकी साल्सामा स्क्विडहरू
यस विधिबाट तपाईंले मेरो छोरालाई कस्तो आनन्द प्रदान गर्नुभयो, यो उनको मनपर्ने भाँसाहरू मध्ये एक हो।तनीहरूले मलाई टेक्निकल सेवाबाट मेशीन ल्याउने बित्तिकै प्रयास गर्नेछु।
जस्तो तपाईलाई मनपर्दछ, अरू कोही पनि घरभित्र पस्दैन। धन्यवाद।
मारिया, ती स्वादिष्ट छन्। म आशा गर्दछु तपाईं यस नुस्खाको साथ सफल हुनुहुनेछ।
एलिसा रोमेरो लोपेज भन्यो
मलाई तपाईंको नुस्खा मनपर्दछ, म यसलाई लेख्न चाँडै नै गर्नेछु! 🙂
एलिसा रोमेरो लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको परिवारले के सोच्छे तपाईले हामीलाई भन्नुहुनेछ, आशा छ तपाईलाई यो मन परेको छ।
नमस्ते, यो कस्तो देखिन्छ? म थर्मोमिक्स २१ को साथ प्याज कुचल पछि सोध्न चाहन्छु जब तपाईं तापक्रम वरोमा टर्न चम्चा भन्छु मैले पुतली राख्नु पर्छ र उही तापमान भेरोमा र गति १ धन्यवाद। ………………… ………
हो, Sandra। तपाईंले पुतली राख्नु भयो, समान तापमान र वेग १, जुन टिएम २१ मा छ जुन सब भन्दा ढिलो छ।
उनीहरू कत्ति राम्रो देखिन्छन्! मलाई तयारीको त्यस्तो क्यान मन पर्दैन, म घरमा धेरै चीजहरू बनाउँछु, त्यसैले म यो हप्ता यो गर्दछु र तिमीलाई भन्छु। तपाईको व्यंजनहरु को लागी धन्यबाद धन्यबाद। चुम्बन
मेरी, म तिमीसंग छु। म क्यानको बारेमा होइन, सबै कुरा जुन घरभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ।
नमस्कार, पहिलो चरणमा, के तपाई मलाई भन्नुहुन्छ कि यो भारामो हो, म बायाँतिर मोड्छु, भारामो गति, के यो चम्चा गति हुन्छ, वा कसरी वरोमो गति छ?
रचीलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई भन्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद, तपाईले भनेको जस्तो थियो। बाल्टिन गति। यो पहिले नै सहि छ।
नमस्कार, म तपाईंको व्यंजनहरु का एक अनुयायी अनुयायी हुँ, बधाई हो, केवल एक प्रश्न, यो नुस्खा बनाउन सकिन्छ मेरो लाग्छ, स्क्विड संग पनि, समय एकै हो? - धन्यवाद
हो पालोमा, तपाईलाई स्क्विड कोशिस गर्नमा कुनै समस्या छैन, म पनि त्यहि समय राख्छु। तपाई हामीलाई बताउनुहुन्छ कि त्यस्तै कसरी छ।
मैले यो नुस्खा गत रात बनाए र सम्पूर्ण परिवारले यसलाई मन परायो।
थप रूपमा, यो धेरै स्वस्थ छ र चामलको साथ, एक धेरै पूर्ण थाल।
धेरै धेरै धन्यवाद, सिल्भिया।
SILVIA लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो !!
धेरै राम्रो, मैले यो देखेको भोलिपल्ट नै बनाएँ, मैले स्क्विड ताजा किनेको थिए, तिनीहरू मरेडाडोनामा राम्रो मूल्यमा छन्, मैले थोरै ब्रान्डी थपें, घरमा हामी पिउँदैनौं, र जुन मसँग छ त्योमध्ये एक हो बलियो व्यक्तिहरू, एउटा उपहार जुन मलाई थाहा थिएन कि यसलाई के खर्च गर्ने हो। धेरै धेरै धन्यबाद, मलाई यस प्रकारका व्यंजनहरुका साथ प्रत्येक दिन मद्दतको लागि, मेरो श्रीमान् खुशी थिए, यो उनको मनपर्ने ससहरु मध्ये एक हो, उसले मलाई पहिले नै उनीहरूलाई फेरि बनाउन भनिरहेको छ, हाह म आफैलाई ब्रान्डी किरहेको देख्छु।
मलाई लाग्छ यदि एन्टोनिया, अन्तमा तपाईले अधिक ब्राण्डी किन्नु पर्छ। मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो !!
पोची र मारी कारमेन भन्यो
तिनीहरू महान बने। चुच्चो टमाटर राख्नुको सट्टा, हामी तिनीहरूलाई टमाटर पहिल्यै फ्राइड (होममेड) बनायौं टमाटरको समय घटाउँदै to reducing। मैले तिनीहरूलाई आज बिहान मर्काडोनामा किनेको छु र म तिनीहरूलाई फेरि गर्न जाँदैछु तर यस समयमा म रोइरहेको मसीको झोला अन्तमा जान लागिरहेको छु।
पोची र मारी कारमेनलाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो राम्रो विचार, सानो स्याही ब्यागको बारेमा। तपाईं हामीलाई बताउनुहुन्छ कि उनीहरू कसरी फर्किए।
एलिसिया पेरेज भन्यो
नमस्ते सिल्भिया, जब व्यंजनहरुमा तपाईले संकेत गर्नुहुन्न कि कति जना मानिसका लागि नुस्खा हो, मँ बुझ्छु यो for का लागि हो ??
तपाईले देख्नु भएको छ, म तपाईको पृष्ठ हेर्न रोक्न सक्दिन, यो एकदम राम्रो छ र मैले फेला पारे पछि म व्यंजनहरू पनि हेर्न रोक्न सक्दिन, मसँग कस्ता दुर्गुण छ।
एलिसिया पेरेजलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, प्राय सबै रेसिपीहरू प्रायः चार व्यक्तिको लागि हुन्छ तर कहिलेकाँहि अभावको अंश पनि हुन्छ।
म ठूलो भएको छु, मँ सधैँ प्राप्त गर्छु तिरस्कार, तपाईलाई यी सबै प्राप्तिका लागि धन्यवाद, म यी पृष्ठहरु संग धेरै सिक्छु।
घरमा हामी पनि यो नुस्खा मनपर्दछौं। म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु।
नमस्ते केटीहरू, आज मैले स्क्विड बनाए र कस्तो अचम्म, उनीहरू स्वादिष्ट छन्। म अलिकति ब्याक गर्दै थिएँ यती धेरै ब्रान्डी राख्न तर म तपाईंलाई भन्छु, म खुशीले चकित भएँ। धन्यबाद, तपाई उत्कृष्ट हुनुहुन्छ।
म तपाईंलाई धेरै मन पराउँछु खुशी छु, सत्य यो हो कि तिनीहरू साँच्चिकै राम्रो आउँछन्। शुभकामना
नमस्ते यदि मसँग ब्रान्डी छैन भने म सेतो वाइन थप्दछु धन्यवाद
मैले टेरेसाको प्रयास गरेको छैन, र सत्य यो हो कि ब्रान्डीले त्यो विशेष स्पर्श दिन्छ, तर यदि तपाइँ सेतो वाइनको प्रयास गर्नुहुन्छ भने, हामीलाई भन्नुहोस् कसरी। शुभकामना
यो राम्रो भएको छ !!!!!
K राम्रो देखिन्छ, म तिनीहरूलाई तयार गर्न जाँदैछु, मलाई शंका छ, अधिक मात्रामा बनाउने, सामग्रीहरू डबल तर एकै समयमा? ... धन्यबाद, एस्के हामी घरमा धेरै छौं।
नमस्ते सल्विया, हिजो मैले यो नुस्खा बनाएँ र हामीले त्यसलाई मन परायौं, तिनीहरू स्वादिष्ट छन् र चटनीले तपाईंलाई केही भनेको छैन। हामी संग यी महान व्यंजनहरु साझा को लागी धेरै धन्यबाद।
Mº लाइट भन्यो
सिल्भिया जहाँ म नयाँ थर्मोमिक्स प्राप्त गर्न को लागी K के प्रकाशन गर्न सक्दछु म पीसी संग नयाँ हुँ र म यो कसरी गर्ने थाहा छैन। र सँधै तपाइँले XK लाई पहुँच गर्नुहुन्छ फेला पार्नुहोस् यदि मैले अरूलाई देखें तर मँ गर्दिनँ र मलाई खोज्न कसरी सकिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। चुम्बन गर्नुहोस् र तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद
Mº LUZ लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते Mª Luz,
जब तपाईं थर्मोरसेटा पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, तपाईं दायाँ पट्टि देख्नुहुनेछ जुन रातो अक्षरहरूमा ईमेल सदस्यता भन्छ। तपाईंले भर्खर आफ्नो ईमेल राख्नु पर्छ र सदस्यता बटनमा थिच्नुहोस्।
यो साधारण इशाराको साथ तपाइँ तपाइँको ईमेलमा सबै समाचारहरू, पूर्ण नि: शुल्क प्राप्त गर्नुहुनेछ।
नमस्ते Mº Luz,
मेलबाट हाम्रा रेसिपीहरू प्राप्त गर्न तपाईंले वेबको दायाँ छेउमा दर्ता गर्नुपर्नेछ जहाँ यसले "इमेलद्वारा सदस्यता" भन्छ। त्यहाँ तपाईंले हामीलाई आफ्नो इमेल छोड्नुहोस् र तपाईंले सक्रियता सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ। र जब तपाइँ त्यो इमेल पुष्टि गर्नुहुन्छ, तिनीहरू हरेक दिन आइपुग्छन्। यहाँ वरपर भेटौंला!
मैले भर्खर यी स्क्वीडहरू बनाउनको लागि समाप्त गरें र मैले भन्नै पर्छ तिनीहरू स्वादिष्ट छन्। मलाई लाग्छ कि यो नुस्खा मेरो मनपर्नेहरू मध्ये एक बन्न गइरहेको छ।
तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
कति राम्रो !! सत्य यो हो कि तिनीहरू बाहिर निस्किन्छन्। तपाईं यो Monkfish, स्वादिष्ट संग बनाउन कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ! तपाइँको टिप्पणी को लागी र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद
म यो नुस्खा बनाउन चाहान्छु तर दुब्लो रकमसँग, पकाउने समय उस्तै हुन्छ?
के म थर्मोमिक्स tm31 मा दुई गुणा फिट हुनेछ?
म्याकडोनाल्ड्स बाट बलौटे आइसक्रीम
लसुन मुक्त लसुन croutons